I-Pakistan Army iyenqaba imibiko yabezindaba yaseNdiya yokudluliselwa okwengeziwe kwamasosha ngaku-LoC
by malikJuly 02, 20200 Comments
IPakistan iyenqabile imibiko yabezindaba yaseNdiya neyenhlalo yezokuxhumana ngokungezelelwa kwamasosha e-Line of Control (i-LoC) eGilgit-Baltistan kanye nezinsolo zokusebenzisa kweSkardu i-airbase yiChina, yayibiza ngokuthi 'ayinanhlonipho' futhi "ikude neqiniso".
Esitatimendeni, i-DG ISPR ithe akukho ukunyakaza okunjalo noma ukuthunyelwa kwamanye amabutho okwenzekile nokuthi iPakistan "iyakuphika ngokuqinile ukuba khona kwamasosha aseChina ePakistan".
Imibiko yabezindaba yaseNdiya ithe, ngaphandle kobufakazi, ukuthi ibutho lasePakistan seliqale ukuthumela amasosha ezinkulungwane eduze kwe-LoC eGilgit-Baltistan, njengoba kube nokungezwani phakathi kweNdiya neChina lapho kuqubuka khona ukuxabana komngcele weLadakh ngenyanga edlule lapho amasosha angamaNdiya angama-20 abulawa khona.
Izitolo zezindaba zaseNdiya ziphinde zasho ukuthi indiza ebiza abantu baseChina ibonwe esikhumulweni sezindiza sasePakistan, i-DG ISPR nayo iphikile.
Angu-20 amasosha aseNdiya afa "ngobuso obunobudlova" namabutho amaChinese eLadakh
Amasosha aseNdiya abulawa esigodini saseGalwan eLadakh ngemuva kokuqubuka kobuso obunobudlova, abezindaba baseNdiya babike, becaphuna amabutho aseNdiya.
I-ANI ibike ukuthi zombili izinhlangothi "zidilikile" ngemuva kokulimala kwamasosha angama-17 eNdiya. Amasosha alimele "abekwe ngaphansi kwezinga lokushisa ngaphansi kwe-zero endaweni ephakeme yendawo asehlise ukulimala", kungeza i-ANI. Lokhu kulethe isibalo sokushona kwabantu, kusukela kwabikwa ukuthi kwabathathu babe ngu-20.
"Ngesikhathi kuqhubeka inqubo yokususwa kwezidumbu e-Galwan Valley, ubuso nobuso obunobudlova benzeke izolo ebusuku nabantu abalimele. Ukulahleka kwezimpilo zabantu ohlangothini lwaseNdiya kubandakanya nesikhulu namasosha amabili. Izikhulu zamasosha eziphezulu zalezi zinhlangothi njengamanje ziyahlangana. endaweni yokucekela phansi lesi simo, "kusho i-NDTV, icaphuna isitatimende esisemthethweni.
IBeijing isola i-India ngokuwela umngcele, 'nokuhlasela abasebenzi'
I-China, ephendula isitatimende saseNdiya, isola amabutho amaNdiya ngokuwela umngcele obukhona phakathi kwalawo mazwe womabili, kubika i-AFP.
Lowo okhulumela uMnyango wezangaPhandle, uZhao Lijian, uthe amabutho aseNdiya awele umngcele kabili, "nokuhlasela nokuhlasela izisebenzi zaseChina, nokuholele ekutheni kube nokuxabana okukhulu phakathi kwamasosha ezinhlangothini zombili".
IBeijing ithe ifake "imibhikisho eqinile kanye nezethulo ezinamandla" kuDelhi.
"Siphinde sicele ohlangothini lwaseNdiya ukuthi balandele ukuvumelana kwethu, silawule ngokuqinile amasosha alo angaphambili futhi angaweli umugqa, angavusi izinkathazo noma enze izinto ezingahambisani nezingadala izinkinga," kusho uCollege Trust waseNdiya ecaphuna uLijian. bethi.
Wengeze wathi, "Uhlangothi lweChina kanye nolweNdiya luvumile ukuxazulula izingqinamba zombili ngokuxoxisana ukuze kudambiswe isimo somngcele kanye nokugcina ukuthula nokuzola ezindaweni zemingcele."